Etu esi enyocha akaụntụ gị na Instagram yana ihe achọrọ ka emee | Gam akporosis
Etu esi enyocha akaụntụ Instagram gị
Edere Ferreno | | Ngwa gam akporo, Nkuzi
Instagram abụrụla otu n'ime ngwa ndị ama ama n'ụwa niile. Ntanetị mmekọrịta nke foto na-enweta niche na ahịa, n'ihi nnabata nke ọrụ ọhụụ na-eme ka ọ zuo ezu, dị ka kaadị NJ gị, ewebata ohuru. Nwere ike ịchọpụtala na ọtụtụ akụkọ dị na ngwa ahụ gosipụtara. Nke a bụ ihe anyị nwere ike ime onwe anyị.
Ya mere, n'okpuru Anyị na-egosi gị usoro anyị ga - agbaso iji nyochaa akaụntụ gị na Instagram. Na mgbakwunye, anyị na-egosi gị ihe ị chọrọ ị ga-eme iji mezuo usoro a. Yabụ inweta ozi niile gbasara ya.
1 Chọrọ iji kwenye na Instagram
2 Nyochaa akaụntụ gị na Instagram
2.1 Nkuzi ndi ozo na Instagram
Chọrọ iji kwenye na Instagram
Anyị nwere ike izipu arịrịọ nyocha ma ọ bụrụ na anyị chọrọ, mana Instagram guzobere usoro nke ihe achọrọ na ndị ọrụ niile ga-erubere iji nweta akara na ọkwa a na ngwa ahụ. Ndị a bụ chọrọ:
Soro iwu ngwa: N'ezie, profaịlụ ọ bụla na ntanetị mmekọrịta ga-agbaso Usoro nke Ọrụ na Iwu Obodo nke Instagram. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-ekwe omume ịnweta nkwenye.
Otu akaụntụ: Akaụntụ a ga-abụrịrị iche maka mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na netwọkụ mmekọrịta. Ihe ewepu bu na ha bu ihe edeturu n’akwukwo di iche iche, dika ufodu uzo si eme. Mana ọ bụ naanị otu akaụntụ maka onye ọ bụla ka a kwadoro.
Ọha na profaịlụ zuru ezu: Enweghị profaịlụ nkeonwe na netwọk mmekọrịta a ga-enyocha. Na mgbakwunye, anyị ga-enwerịrị data nkeonwe anyị juputara ma nwee foto profaịlụ.
Ezigbo akaụntụ: Ọ gha ịbụ ezigbo akaụntụ, nke ezigbo mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Enweghị akaụntụ adịgboroja a ga-enyocha na Instagram
Akaụntụ dị mkpa: Akaụntụ ịchọrọ ị nyocha ga-amata ma ọ bụ mepụta ọtụtụ ọchụchọ na mmasị sitere na ndị ọrụ. Yabụ, Instagram ga-achọ aha gị na akụkọ ahụ iji hụ ma ọ bara uru nyocha akaụntụ ahụ. Ya mere edebere nke a maka ndị ama ama.
Enweghị ihe ọ bụla nwere mmasị: Akụkọ ndekọ ọmụrụ nwa, ọ bụ ezie na ọ bụ ewu ewu, anaghị ewere ya na netwọkụ mmekọrịta dị mkpa. Ha agaghị enweta nkwenye.
Agaghị atụ aro ka ha tinye gị na netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ: Anyị enweghị ike itinye na nkọwa nke akaụntụ ha tinye anyị na netwọkụ mmekọrịta ọzọ ma ọ bụ na anyị nwere njikọ na ha. A na-eme ya iji zere ịmepụta okporo ụzọ na asọmpi ahụ.
Amachibidoro ozi ụghaỌ bụrụ na ịnye ozi ụgha na usoro nkwenye a, a ga-ewepụ baajị ya. Ọbụna akaụntụ gị nwere ike ihichapụ kpamkpam.
Nyochaa akaụntụ gị na Instagram
Ozugbo anyị matara ihe ndị achọrọ na netwọkụ mmekọrịta, anyị nwere ike ịmalite usoro zuru ezu. Anyị ga-ebu arịrịọ nyocha nke akaụntụ anyị na Instagram. Maka ya, anyị ga-ebu ụzọ gaa profaịlụ anyị Na netwọkụ mmekọrịta, ebe ahụ, anyị pịa ọnụọgụ atọ kwụ ọtọ na akụkụ aka nri elu.
Mgbe ahụ anyị ga-enweta ọtụtụ nhọrọ ma anyị ga-pịa nhazi, nke na-egosi na ala nke ihuenyo ahụ. Mgbe anyị nọ n'ime nhazi ahụ, Anyị ga-aga na ngalaba nyocha arịrịọ, nke anyị nwere ike ịchọta na ngalaba Akaụntụ na nhazi a. Ọzọ, ihuenyo ọhụụ ga-apụta na nke anyị ga-ejupụta na data anyị. Ala ndị a gwara anyị ka anyị jupụta bụ:
Aha njirimaraNke a juputara na Instagram n'onwe ya
Aha na aha nna: Ezigbo aha na aha nna
A maara gị dị ka: Ọ bụrụ na ị na-eji ihe ọ bụla ogbo aha ma ọ bụ aha otutu nke ị na-eji mara online
Udi: Mustkwesịrị ịhọrọ ụdị profaịlụ gị, site na ndepụta ha nyere gị
Gbakwunye onyonyo nke akwụkwọ njirimara gị: Tinye foto NJ gị
Mgbe anyị juputara na ozi a, naanị anyị ga-eziga arịrịọ a. Instagram enwetaworị ya, mgbe ahụ ọ bụ okwu ichere maka netwọkụ mmekọrịta iji mezue nyocha ya. Ha ga-akpọtụrụ gị n'onwe ha iji mee ka ị mara ma à nabatala ya ma ọ bụ na ọ bụghị.
Nkuzi ndi ozo na Instagram
Etu esi ajụ ajụjụ na Akụkọ gbasara Instagram
Etu esi eme ka ịchekwa data na Instagram
Etu esi ekpochapụ akụkọ ihe mere eme na Instagram
Etu esi bulite vidiyo elekere 1 na Instagram
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu esi enyocha akaụntụ Instagram gị
kedụ ka ụmụ okorobịa instagram niile
Esi kagbuo izipu email na Gmail maka gam akporo
Ngwa iji lelee ihe egwu dị egwu na Halloween